I-Podcasting Iyaqhubeka Ukukhula Ekuthandweni Nokwenza Imali | Martech Zone
Sithole cishe ama-4 million wokulandwa kweziqephu ezingama-200 + zethu ukumaketha i-podcast kuze kube manje, futhi iyaqhubeka nokukhula. Kangangokuthi sitshale imali yethu istudiyo se-podcast. Empeleni ngisezigabeni zokuklanywa zefayela le- new studio engingahle ngithuthele ekhaya lami ngoba ngizithola ngibamba iqhaza noma ngisebenzisa ama-podcast amaningi.
Kusukela ekuqaleni kwayo okuthobekile ngo-2003, i-podcasting isiphenduke amandla angenakunqandeka ekukhangiseni okuqukethwe futhi ayikhombisi zimpawu zokuma - inani lama-podcast asebenzayo selikhuphukile kusukela ngo-2008. UJon Nastor
Izibalo ze-Podcasts zika-2018
Abalaleli bePodcast balalela isilinganiso semibukiso engu-7 ngesonto, okungama-40% kusukela ngo-2017
Kukhona ama-podcast asebenzayo angama-550,000 ngezilimi ezingaphezu kwekhulu ngeziqephu eziyizigidi eziyi-100 ezitholakala ku-inthanethi
Izinhlobo ezi-5 eziphezulu ze-podcasting ezomphakathi namasiko, ezamabhizinisi, amahlaya, izindaba nezepolitiki, kanye nezempilo
Ama-64% wabantu base-US bajwayele leli gama i-podcasting
Ama-44% wabantu base-US balalele i-podcast, ama-26% alalela ama-podcast njalo ngenyanga, ama-17% masonto onke, nabalandeli abathandekayo abangu-6%
Inani labantu elibalulekile kuma-podcast ngabaneminyaka engama-25-34 ubudala, imvamisa okunzima ukufinyelelwa ngabantu ngokukhangisa
Abalaleli bePodcast banamathuba angama-45% okuba neziqu zasekolishi kanti u-37% kungenzeka abe nemali engenayo yonyaka engama- $ 100,000 noma ngaphezulu
Yini eguqukayo ukuthi ama-Podcast adume kakhulu?
Reverse iminyaka embalwa bese ukuqeda ama-podcast kwakuwumsebenzi onzima. Ukube ubunedivayisi ye-iOS, kuzofanele ume bese uvumelanisa idivayisi yakho ne-iTunes ngemuva kokubhalisela ama-podcast owathandile. Kodwa-ke, njengoba amadivayisi athuthukile futhi ukuxhumana kwe-broadband sekuyinsakavukela, Ukusakaza ama-podcast sekuyinto ejwayelekile. I-Apple ine uhlelo lokusebenza lwama-podcast, futhi kukhona futhi Stitcher, TuneIn, IBlogTalkRadio, nezinhlelo zokusebenza zeselula zingahlanganisa abadlali kalula.
Ngaphandle kokulalela lapho ugijima ekuseni noma uhamba ngebhayisikili ntambama, ukuhlanganiswa okungenamthungo kwama-smartphones nezimoto kwenze i-podcast ilalele okudingekayo ekuhambeni kwakho ekuseni nantambama. Ngokubona kwami, ngikholwa ukuthi le kube yindawo enkulu kakhulu yokukhula ngama-podcast ebhizinisi.
Akukhona nje kuphela ukuthi ukusetshenziswa kuyashintsha, kanjalo nokuziphatha. Njengoba nje abantu bezohlala babuke iNetflix amahora amaningi, sithola ukuthi abalaleli bethu bazolalela amahora we-podcast yethu ngesikhathi esisodwa. Hlanganisa lokhu nezindawo zokuxhumana ezintsha ezijwayelekile ezimotweni zango-2016 ezingadla ama-podcast… nomsindo ofunwayo uzosuka njengoba singakaze sibonwe ngaphambili!
Use production uhlangothi, i-podcasting iba lula kakhulu. Bekade kudinga isitudiyo esinomsindo, imakrofoni ezibizayo, nesixubi sokuqopha… bese sikudlulisela kusihleli somsindo ukuze sishune futhi silungise. Ngisanda kwenza amanye ama-podcast emgwaqweni nge Zoom H6 rekhoda neqoqo le- Shure imakrofoni ze-SM58 - futhi ukucaca kwama-podcast kwakumangalisa. Heck, ungaqala nge Uhlelo lokusebenza lwe-Anchor podcast, nehedisethi enhle ye-Bluetooth isebenza kahle.
Ukusetshenziswa kwemidiya kukhombisa izimpawu zokushintshwa ngendlela emangalisayo yibo bobabili ubuchwepheshe kanye nama-paradigms amasha. Ukusetshenziswa okwandayo kweSelula 'njengesikrini sokuqala,' kanye nokuphakama kwamafomu wokuqukethwe okunye, njengama-podcast nokuqukethwe 'okuzibophezelayo' okuvela ezinsizakalweni zevidiyo ezifunwayo kuphazamisa inkoleloze yokuthi ukunakwa kwethu kufushane. UTom Webster, Iphini Likamongameli Wecebo lika-Edison
Ukwenza imali ngePodcasting: Kuyenzeka
Ngemuva kweminyaka eminingi kangaka yepodcasting, ngithola nemali enesizotha ngabaxhasi abathile (ngiyabonga KhangisaCast). Ngoba ama-podcast ami kungenzeka athole ukulalelwa okungu-10k + ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, abakhangisi bakhokha amakhulu ambalwa amadola isiqephu ngasinye. Lokho kungahle kungazwakali njengokuningi, kepha kwenza isikhathi sizuze ukuhlela, ukurekhoda, nokushicilela ama-podcast. Futhi ngokungafani nombhalo nevidiyo, i-podcasting iyinto enhle yokukhangisa ngoba unake isilaleli. Vele, ngiyaqiniseka ukuthi abakhangisi bami bafanele futhi bayigugu kubalaleli bami futhi - ngicabanga ukuthi lokho kuyisihluthulelo. Ngeke ungizwe ngizama ukuthengisa omatilasi ku izingxoxo zokumaketha!
Uma engekho ama-podcast athandwayo embonini yakho, lesi yisikhathi sokuqala esisodwa! Konke kuphakeme lapha!
Tags: 2018ucwaningo lwe-edisonIABUkumaketha i-PodcastukuleleNielsenokuqukethwe pacificIzigaba ze-podcastukusetshenziswa kwe-podcastukukhula kwe-podcastizibalo ze-podcastizibalo ze-podcastistudiyo se-podcasti-podcastingukukhula kwe-podcastingizibalo ze-podcastingpwc